နှုတျခမျးခငျြးနမျးပွတာတောငျ ခှေးငတျ ရခေဲမုနျ့ လကျြပွနသေလိုကွီးလို့ ပွောလိုကျတဲ့ ပနျဆယျလို.. - Khitthit Myanmar
November 12, 2019 KhitthitMyanmar အနုပညာကဏ္ဍ 0
လူမှုကှနျယကျမှာ အကွောငျးအရာ တဈခုခု ဂယကျထလာတိုငျး အမွငျအတိုငျး ရေးသားမြှဝလေရှေိ့တဲ့ ပနျဆယျလို ကတော့ အခုရကျပိုငျးမှာ နာမညျကွီးပွီး ဝဖေနျသူတှမြေားပွားနတေဲ့ အကွောငျးအရာ တဈခုနဲ့ပတျသကျပွီး ခပျပွငျးပွငျးလေး ဝဖေနျရေးသားထားကို တှရေ့ပါတယျ။
ပနျဆယျလိုရေးသားထားတာကတော့ မွနျမာပွညျက အနုပညာရှငျတခြို့ကို ထိထိမိမိ ဝဖေနျရေးသားထားခွငျးပဲဖွဈပါတယျ။ ဘာအကွောငျးအရာလဲဆိုတာကတော့ ပရိသတျကွီးကို ပွောပွဖို့ လိုမယျမထငျတော့ပါဘူးနျော..။
ပနျဆယျလို ရေးသားထားတဲ့ ရေးသားခကျြလေးတှကေို ဖတျကွညျ့ရအောငျ….
မွနျမာပွညျက အနုပညာအဆငျ့အတနျးဆိုသညျမှာလညျး အတျောစိတျလစေရာကောငျးလှနျးတယျ။
အိုကေ… ထားပါ … Conservative မဖွဈပါဘူး။
ဘာပုတယျ ညာပုတယျ မွနျမာ့ယဉျကြေးမှု ဘလာဘလာတှလေညျး မပွောပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ အပွာတောငျ အဆငျ့မီအောငျ မရိုကျနိုငျဘဲ ကကြိုးကကွောငျတှေ ထှကျလာသေးတယျ။
စိတျထကွှအောငျ ရညျရှယျပွီး ရိုကျတာတောငျ စိတျမထကွှဖို့နနေသောသာ ရှိပွီးသာ တဏှာရာဂတောငျ ဟုပျခနဲ ငွိမျးလောကျတယျ။ သူမြားတှေ Love Scene တှေ ရငျခုနျစိတျလှုပျရှားဖှယျ ရိုကျပွနတော၊ ဒီမယျတော့ အဆီတဝငျးဝငျးနဲ့။ လလလလတှကေို ဖွဈလို့….
လိငျကိစ်စဆိုပမေယျ့ ခဈြခွငျးမတ်ေတာ အခွခေံ ယဈမူးရငျခုနျဖှယျမဟုတျဘဲ ပွညျ့တနျဆာနဲ့ ပြျောပါးနသေလို Sense ကွီးပဲ ရတယျ။ ဘာကွီးလဲဟဆိုပွီး အမွနျပိတျပဈရတယျ။ အရှကျသညျးလှနျးလို့ မဟုတျဘူး။ ကိလသော အာသဝေါကုနျပွီး တောထှကျမိတော့မှာ စိုးလို့…. ခှီး
အရငျတုနျးကတော့ ဆငျဆာကွောငျ့ အဆငျ့အတနျးနိမျ့ရတာပါတဲ့။ ဆငျဆာလညျး မရှိရော… ကုတငျပျေါက အခနျးတှခေညျြး ထှကျလာတယျ။ အဲ့ဒါတောငျ ကောငျးကောငျးကနျးကနျး အနအေထားမဟုတျဘူး။ အျောလီအျောလကျ ကွကျတနျးအထာနဲ့…
အနုပညာ အနုပညာနဲ့ ပါးစပျနဲ့မဆနျ့ ပွောနတောတှေ ခကျြခငျြးရပျလို့ပဲ ပွောလိုကျခငျြတော့တယျ…
နှုတျခမျးခငျြးနမျးပွတာတောငျ ခှေးငတျ ရခေဲမုနျ့ လကျြပွနသေလိုကွီး…
လူမှုကွန်ယက်မှာ အကြောင်းအရာ တစ်ခုခု ဂယက်ထလာတိုင်း အမြင်အတိုင်း ရေးသားမျှဝေလေ့ရှိတဲ့ ပန်ဆယ်လို ကတော့ အခုရက်ပိုင်းမှာ နာမည်ကြီးပြီး ဝေဖန်သူတွေများပြားနေတဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ခပ်ပြင်းပြင်းလေး ဝေဖန်ရေးသားထားကို တွေ့ရပါတယ်။
ပန်ဆယ်လိုရေးသားထားတာကတော့ မြန်မာပြည်က အနုပညာရှင်တချို့ကို ထိထိမိမိ ဝေဖန်ရေးသားထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာအကြောင်းအရာလဲဆိုတာကတော့ ပရိသတ်ကြီးကို ပြောပြဖို့ လိုမယ်မထင်တော့ပါဘူးနော်..။
ပန်ဆယ်လို ရေးသားထားတဲ့ ရေးသားချက်လေးတွေကို ဖတ်ကြည့်ရအောင်….
မြန်မာပြည်က အနုပညာအဆင့်အတန်းဆိုသည်မှာလည်း အတော်စိတ်လေစရာကောင်းလွန်းတယ်။
အိုကေ… ထားပါ … Conservative မဖြစ်ပါဘူး။
ဘာပုတယ် ညာပုတယ် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ဘလာဘလာတွေလည်း မပြောပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အပြာတောင် အဆင့်မီအောင် မရိုက်နိုင်ဘဲ ကကျိုးကကြောင်တွေ ထွက်လာသေးတယ်။
စိတ်ထကြွအောင် ရည်ရွယ်ပြီး ရိုက်တာတောင် စိတ်မထကြွဖို့နေနေသာသာ ရှိပြီးသာ တဏှာရာဂတောင် ဟုပ်ခနဲ ငြိမ်းလောက်တယ်။ သူများတွေ Love Scene တွေ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ရိုက်ပြနေတာ၊ ဒီမယ်တော့ အဆီတဝင်းဝင်းနဲ့။ လလလလတွေကို ဖြစ်လို့….
လိင်ကိစ္စဆိုပေမယ့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ အခြေခံ ယစ်မူးရင်ခုန်ဖွယ်မဟုတ်ဘဲ ပြည့်တန်ဆာနဲ့ ပျော်ပါးနေသလို Sense ကြီးပဲ ရတယ်။ ဘာကြီးလဲဟဆိုပြီး အမြန်ပိတ်ပစ်ရတယ်။ အရှက်သည်းလွန်းလို့ မဟုတ်ဘူး။ ကိလေသာ အာသဝေါကုန်ပြီး တောထွက်မိတော့မှာ စိုးလို့…. ခွီး
အရင်တုန်းကတော့ ဆင်ဆာကြောင့် အဆင့်အတန်းနိမ့်ရတာပါတဲ့။ ဆင်ဆာလည်း မရှိရော… ကုတင်ပေါ်က အခန်းတွေချည်း ထွက်လာတယ်။ အဲ့ဒါတောင် ကောင်းကောင်းကန်းကန်း အနေအထားမဟုတ်ဘူး။ အော်လီအော်လက် ကြက်တန်းအထာနဲ့…
အနုပညာ အနုပညာနဲ့ ပါးစပ်နဲ့မဆန့် ပြောနေတာတွေ ချက်ချင်းရပ်လို့ပဲ ပြောလိုက်ချင်တော့တယ်…
နှုတ်ခမ်းချင်းနမ်းပြတာတောင် ခွေးငတ် ရေခဲမုန့် လျက်ပြနေသလိုကြီး…